Ngemuva kwe- Rocket Lake, izinto ezi-5 okumele zenziwe yi-Intel kwideskithophu ukubuyisa umlingo wayo we-CPU
ngemuva kwe- "Rocket Lake", izinto ezi-5 okumele zenziwe yi-Intel kwideskithophu ukubuyisa umlingo wayo we-CPU
Asifuni ukucisha ibhizinisi lapho liphansi, bese sizokweqa isingeniso esifanayo osifunde izikhathi ezimbalwa eminyakeni embalwa edlule: i-AMD ne-loop yayo ye-Ryzen ezungeze i-Intel kanye
ne-Desktop CPU Core
yayo. Futhi i-Intel iyaqhubeka nokuzidubula ku-sneaker, lapho nje ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi sekusele ukubuyela emjahweni. Ukwethulwa kweprosesa yakamuva yenkampani, uchungechunge lwe-11th "Rocket Lake" Core series, kube yinto egxekwa kakhulu (
eyethu phakathi kwabo
). Ngesikhathi lapho i-Intel yayidinga ukuqeda nya i-Empire State Building, isibuko sagqashuka futhi wonke umuntu wabona lokho.
Ngakho-ke manje njengoba uthuli olusuka ekwethulweni kweRocket Rock selulungile, futhi isinqumo siyaqina ku-11th gen kernel, yini i-Intel engayenza ukuze ihlale kulo mjaho?Amaprosesa wedeskithophu, enengcindezi ekhulayo evela kuzo zonke izinhlangothi? I-AMD isekhona futhi igxilile kubuchwepheshe be-nanometer eyi-7 ngeRyzen. Futhi-ke kukhona i-X factor ye-Apple nomugqa wayo wama-processor we-M1 osutholakale kuma-laptops kuze kube manje. I-Intel kumele isebenze, futhi kungekudala. Akukho okwenzeka ngokushesha, khumbula wena, ku-CPU World; ukubheja kwezobuchwepheshe okwenziwa ngabakhiqizi bezinkokhelo kukhokha noma kwehle eminyakeni edlule. Kepha nalu uhlelo lokusebenza lomhlaba omuhle.
1. Phuma ku-14nm
Ake siqale ngezinto ezisobala: I-Intel, ungabuyekezi uhlobo lwe-11 noma uzame ukuthenga nge-tech 14nm. I-10th Gen “Comet Lake Refresh” emenyezelwe eceleni kweRocket Lake iyinto encane kwezinye izindawo ezisezingeni eliphansi le-10th Gen Pentium kanye neCore i3 chips, ehlose ukuqinisa uhlelo lwe-Intel's processor processor. Azikho izinqubo ezintsha zangempelaukuphela okuphansi edwaleni le-rocket f amily.
Ukubona ukuthi iComet Lake Refresh iyimizamo yokuhambisana nokuthi iyiphi ingxenye enkulu kunazo zonke emakethe yokucubungula ideskithophu (amabanga aphakathi nendawo kanye namaprosesa asezingeni eliphansi), asethembe ukuthi inkampani ayisiye ungabheki “ukuvuselela” amamodeli afana neCore i5-11600K lapho uchungechunge lwe-12th yenkampani ye-10nm processor series "i-Alder Lake" ikhishwa ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa i-Intel iqale ukukhiqiza amaprosesa asuselwa ku-14nm lithography yayo, futhi yisikhathi sokuhamba kuvuliwe, zombili kusuka kumbono wobuchwepheshe, wokumaketha nowobunjiniyela. Ukwethulwa kwe-
Core i9-11900K kukhombisa ukuthi onjiniyela be-Intel bathathe le nqubo ngokuya ngangokunokwenzeka, ngisho nangezinhlamvu zayo eziyi-10nm "Ice Lake" ezazibuyiselwe emuva kwinqubo ye-14nm. Isidingo sokwenzaUkuhambisa umugqa we-10th Gen's flagship 10-core chip ube yisishiyagalombili nje manje kuwuphawu lokuthi imikhawulo ifinyelelwe.
Ngenhlanhla, kubukeka sengathi i-Intel izinikele ngokuphelele emgwacweni wayo wokukhulula bonke abacubungula bakusasa ekwakhiweni kwayo okusha kwe-10nm. Isikhulu esisha u-Pat Gelsinger usanda kunikeza ngesibukezo ngezinhlelo zakhe
zama- $ 20 billion zokwakha amafemu amasha we-7nm enkampanini yase-Arizona yenkampani.
(I-Cred image it: Intel)
I-Intel izokwakha ama-chips ngasikhathi ekusebenzeni kwayo nakwamanye amakhasimende, okuyingxenye yalokho ekuyibiza ngenethiwekhi yayo ye- "Intel Foundry Services" yezindawo zokukhiqiza kanye nokubambisana okungaba khona namafemu angaphandle afana neTaiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Kuluhlelo oluthi, uma luzuzisa ngokwanele, lunikeze i-Intel isisekelo esidinga ukuzisungula kabusha.faka umgwaqo obonisa ukuma okuncintisana ngokwengeziwe ne-AMD kuma-processor we-desktop, ezindaweni ezinjenge-lithography, idizayini, ubuchwepheshe, ukukhiqiza nezinqubo. .
2. Ukuphinda usimende we-PC-Gaming Supremacy
I-Intel ikhombisile, noma ngokwethulwa okujwayelekile kweRocket Rock, ukuthi kuhle ukwenza okukodwa- ukubalwa okuhlanganisiwe. Noma isikweletu sezobuchwepheshe se-14nm siboshelwe ezikhonkweni zaso, i-Intel ayibanga nankinga yokuthola amazinga ophakeme kakhulu emidlalweni ebangeni eliphakathi nendawo nokunikelwa okuphezulu eminyakeni embalwa eyedlule., Lawa maprosesa ahlotshaniswa nohlelo olucacile. I-Ryz fr 9 5900X ) eshaya iprosesa le-Intel Core i9-11900K kumageyimu amaningi athandwayo. Kuyinto enhle okufanele ibe nzima ngenani lama-cores angeziwe.
I-AMD icwenge ukwakheka kwayo kweZen yaba yintambo enhle, engashaya noma iyiphi indawo ethambile evela ku-Intel, apngokusobala ngesicelo. I-
, yamaprosesa amabili phakathi kohlu lwe-11th Gen Rocket Lake esilubuyekezile kuze kube manje, iyimpahla enhle kakhulu ye-Intel yokugcina ukuhambisana engxoxweni yokudlala njengamanje., Ingasaphathwa eyokuthi isikhundla sobuholi. I-Intel Alder Lake kuzofanele yenze konke okusemandleni ukubuyisa ngokuqinile i-AMD eholile esabise emidlalweni yedeskithophu. Futhi kuze kube yilapho sesazi okuningi nge-12th Gen Intel noma i-AMD Zen 4, asikwazi ukusho ngokuqinisekile ukuthi le mpi izogqashuka kanjani. Impendulo ye-Intel ilindeleke ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka; asiqiniseki ngama-AMD.
Okwamanje, nokho, kuyacaca: I-AMD's Ryzen 5000 manje isiyinketho elinganayo noma engcono kubadlali abenza isabelomali, abashisayo, noma abazi amandla. Futhi, uyazi, amazinga aphezulu wohlaka nawo!
3. Sicela unamathele kusokhethi eyodwa isikhashana.isikhathi
Indawo enkulu lapho isiphakamiso senani lamaprosesa we-AMD wedeskithophu uma kuqhathaniswa nabaprosesa be-Intel asicaci kahle yilokho okwaziwa ngokuthi "izindleko zokwamukelwa". , kungaba yinoma yini uma udinga ukuthuthukisa ukunikezwa kwamandla kwe-PC yakho ukwamukela iprosesa elambele amandla kakhulu, ukuthenga i-motherboard entsha ukuze ihambisane ne-chipset ebuyekeziwe kanye nesokhethi leprosesa elisha. I-AMD ibikhipha amaprosesa amasha eRyzen ngaphansi kwezakhiwo zayo zeZen njalo isikhathi esingaphezulu kweminyaka emine manje. Futhi ungathola amaprosesa esizukulwane samanje afana neRyzen 9 5900X, ekhishwe ngo-2020, engahle, ngemodeli yekhadi elifanele nokubuyekezwa okulungile kwe-BIOS, ngokusebenza ngokusemthethweni kubhodi yomama ye-B350 ekhishwe ngo-2017.
Manje asikho isiqinisekiso. Isimo sinzima kakhulu phakathi kwabakhiqizi be-motherboard abahlukahlukene naku- inkuya ngeprosesa eyiyo ye-Ryzen ofuna ukuyisebenzisa. Kepha sekukonke, i-AMD's Socket AM4 inikela ngezinga lokuhambisana okubuyela emuva kwama-chipset namasokhethi i-Intel engazabalazeli ukufanisa nje kuphela, kepha kaningi ibonakala iklama ngenkuthalo.
Izisekelo ezimbili zamasokhethi ayisizukulwane akuyona into entsha ye-Intel, khumbula wena. Eminyakeni emine efanayo lapho i-AMD ikhiphe amaprosesa wedeskithophu ahambelana ne-AM4, i-Intel yadlula kumasokhethi amabili, kwathi esinye isokhethi esisha (i-LGA 1700)
I-Alder Lake ibekelwe ukukhishwa ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka.
. Indlela ka-Intel yenze umqondo weplatifomu yebhodi lomama elingaqedi cishe lingabi khona, kuyilapho i-AMD yenza konke okusemandleni ayo ukuletha abathengi abaningi abadala nabasha emhlabeni ngangokunokwenzeka.
I-AMD ikhombisile ukuthi ngisho namaprosesa asezingeni eliphakeme kakhulu angasekelwa isikhashana ku-cImigqa yomama abadala kakhulu, uma kukhona incwadi yefa yobuchwepheshe kanye nesivumelwano phakathi kwabalingani bekhadi. Ngakho-ke uma i-Intel izoqhubeka nokuncintisana ngokwezindleko zokutholwa, idinga ukuthola indlela yokwephula umdanso wesokhethi ngezinyathelo ezimbili ... futhi ngokushesha.
4. Thola ihluzo ezihlanganisiwe kumazinga we-AMD
Njengoba sishilo ngenhla, imakethe yamaprosesa asezingeni eliphakathi nendawo kuya emazingeni aphansi imele isabelo sengonyama sokuthengiswa kwe-desktop chip . Futhi sandwich kunezinqubo eziningi zokucubungula ezinehluzo ezihlanganisiwe. Kuze kube muva nje, ibiphethwe ngabaprosesa be-Intel nge-poky yayo ehlanganisiwe ye-silicon UHD Graphics kanye nokusetshenziswa kwayo (imvamisa i-UHD 630 noma i-600). Sibabiza ngokuthi ngama-processor processor (IGPs). Abathengi abaningi besabelomali esiphansi bababiza ngokuthi amakhaya.
Lezi zinhlobo zamaprosesa zithandwa kakhulu kumakethe yomakhi we-OEM / systemama-PC anesabelomali esisezingeni eliphansi ngoba enza kube lula ukuthola i-PC yedeskithophu esebenza kancane (yomsebenzi wehhovisi, uqobo) emhlabathini. Futhi i-IGP enhle, ngokuzumayo, ibaluleke kakhulu lapha ku-2021 ngamanani anyukayo wamakhadi emidwebo. Kodwa-ke, ama-gamers amaningi we-PC nawo abhajethi eqinile, futhi kwesinye isikhathi iprosesa ye-Intel ene-UHD Graphics IGP noma i-chip ye-AMD enomlingani wayo weRadeon yenza umehluko phakathi kokuba ne-PC yedeskithophu ongadlala kuyo noma ungabi nalutho.
Masibuyele kwenye igrafu, kusuka ekuhlolweni kwethu kokuqaliswa kwe-Rocket Lake chip, lapha kwe-IGP ku-Core i5-11600K. Ngalesi sigaba semakethe, inkanyezi
iRyzen 5 3400G ibusa ngokubonga okukhulu ngokuhlanganiswa kwayo kweRadeon RX Vega 11 IGP ...
Njengoba ukwazi ukubona kumathebhu wegrafu engezansi Ngenhla, i-Intel ngokusobala wenze inqubekela phambili enkulu ekuthuthukiseni i-chip yayo. imidwebo yezithombe. Ububanzi beRocket Lake bungowokuqala ku-ideskithophu ukuhlanganisa ihluzo ezintsha ze-Intel ze-Iris Xe. Kusefomini ye-iteration entsha ye-UHD, i-UHD 750, ezimweni eziningi. (U-Iris Xe uqale ukuvela kuma-processor ephathekayo ama-laptops we-11th "Tiger Lake", futhi kwaba isambulo lapho.) Izikolo eziningi nemiphumela yezinga lohlaka erekhodwe ngesikhathi sokuhlolwa kwethu kwe-Intel Cor IGP i5-11600K (ne-chip ifakwe okusha Iris Xe UHD Graphics 750 IGP) iphindwe kabili leyo yesizukulwane esedlule.
Lesi yisivumelwano esikhulu se-Intel, njengoba iningi lamachips womugqa we-AMD's Ryzen angenayo i-IGP futhi adinga ikhadi levidiyo ukuthi lisebenze. (Futhi, sishilo, amakhadi evidiyo ayabiza kulezi zinsuku?) Lokhu kukhushulwa kokusebenza kwe-IGP kuyisiqalo esihle, kepha kusalokhu kuqhathaniseka kuqhathaniswa ne-AMD's Ryzen IGP ku- Ryzen 5 3400G
, eyethulwe ... emuva ngo-2019.
I-AMD inamanye ala ma-chip afakwe i-IGP kuma-sthina isikhwama. (Babizwa nge-G-Series, enye i-
.) Banikela ngenani elikhulu kubathengi bemali abafuna ukudlala imidlalo ku-IGP, futhi ngenkathi kunzima ukukuthola manje amanani asondele kuzintengo zohlu lwawo ($ 149 kanye ne- $ 99 ngesikhathi sokukhishwa), aziwona ama-gamer angabizi kakhulu. Ngokwengeziwe, silindele ukuvuselelwa kweRyzen 5000 yalezi chips ze-G ngo-2021. Zidlulile isikhathi. Futhi uma bengqongqoza, bheka u-Iris Xe.
5. Ungakhiphi enye i-Core i9-11900K
Sikholelwa ukuthi i-Rocket Lake Core i9 flagship ingabona ukulungiswa kwentengo isikhathi eside kakhulu. Kuyashisa kakhulu futhi kuyabiza kakhulu ukuthi kuyini. Ngaphezu kwalokho, kwakunzima ukuhlola.
Ababuyekezi abaningi kuwebhu, kufaka phakathi nami, bakuthole kunzima lokhu kuqaliswa. Ngokuqinisekile, i-AMD ayiyona into engaziwa ku-BIOS noma izingqinamba zokushayela zangaphambi kokukhishwa (te kuzo zombili izinqubo zayo ze-
ne-GPU ), kepha ukuthi yini abahloli bokulinganisa abaningi obekufanele babhekane nalesi sikhathi ezungeze ukuthi basilinde ... i-Alder Lake. Isinqumo sethu sokugcina ku-processor yenkampani yedeskithophu yakamuva yenkampani yancishiswa izingqinamba ezimbalwa zokuhlola. Kepha ngemuva kosuku noma ezimbili kulandela ukukhishwa kwayo, ukuvumelana kuyo yonke i-journal-o-sphere kuku: Leli akulona ihora le-Intel elihle kakhulu le-silicon.
Kuyaxaka kumkhiqizi weprosesa ledeskithophu ukuthi siyaziqhenya ngokuqina. Ngokwengeziwe, inkampani ithengise intengo yeCore i9-11900K, iprosesa eyisisekelo eyisishiyagalombili, ngaphezulu kwedokhi layo, nakuwo wonke amathuba okucekela phansi i-AMD, iye kolunye uhlangothi futhi yashaja kakhulu i-CPU.Ideskithophu engondlekile futhi enikwa amandla okuzayo ngama-cores amabili ambalwa kunangaphambi kwawo ngentengo ephezulu. Siyazi ukuthi ukukhiqizwa kwe-silicon yibhodlela le-e kulezi zinsuku futhi amanani aphezulu, kepha ukwehla kwamandla emali okuyisisekelo namanani entengo eyodwa? Hamba!
I-Intel ibilokhu iziphambanweni iminyaka eminingana manje ngenxa yokukhathazeka ngokulahlekelwa isikhundla sayo sobuholi kuma-PC wedeskithophu, i-AMD idlula inkampani kumadeski kumazinga amaningi entengo. ICore i9-11900K iqinisa kuphela umbono emiqondweni yabadlali bamageyimu nabadali bokuqukethwe ukuthi i-Intel isengozini kakhulu kunanini ngaphambili ekuhlaselweni ngamasu kwe-AMD.
Ukuzijabulisa okulandelayo kwenkampani kuma-processor we-desktop
, okuvele kuyibeka ngemuva kwe-AMD kwi-lithography ngaphambi kokuthi i-12th gen kernel ivele. Okungadingeka ukuthi i-Intel ikwenze ukubona lesi sikhundla, ngokuhambisana nemakethe, bese wehlisa amanani aso ngokufanele. Uma inkampani yazi ukuthi i-Alder Lake ngeke ikwazi ukufanisa nalokho u-AI-MD iphekele iZen 4, ukudlala umdlalo wamanani isikhashana kungaba yindlela ozohamba ngayo. Ezinye izingxenye ze-Intel zisengamaqembu ezigelekeqe, ngemuva kwakho konke.
Amahemuhemu okuqala akhombisa ukuthi iZen 4 izosuselwa ku-5nm lithography ye-TSMC nombala wayo wokwethulwa ekuqaleni kuka-2022, inikeze i-Alder Lake iwindi elincane le-Intel lokuqinisa isikhundla sayo sokulwa ngo-2021 nangaphezulu.
I-Intel inomgwaqo omude (ikhadi) phambili Uma i-Intel ingakwenzi lokhu Ngalesi sikhathi, ingalazisi kahle i-chipbank yayo, ingaholela ekutheni ukubambezeleka okukhulu kakhulu kwenkampani uma kuqhathaniswa nalokho esivele kuyikho nalokhu kwethulwa kwamuva.
Manje kuyiqiniso ukuthi inkulumo yokuvulwa kwe-inthanethi yakamuva yenkampani ne-CEO yayo entsha ibikhulume ngokumangazayo, nge inkampani ivuma ngokusobala ukuthi isemuva kwesikhathi, ngenkathi yethula ngokucophelela umgwaqo wayo. yendlelauyabuya. Kepha, uma kukhona inkampani okuyiyona ingane yesisho esithi "amamephu omgwaqo enzelwe ukuthi yephulwe," eminyakeni yamuva, yi-Intel. Ngabe inqubekela phambili ye-Intel ekwakheni izisekelo ezintsha noma (ngisho nangaphambi kokuba usimende wonke womile kubo) ukushintshela ku-10nm kuzokwanela ukubuyisela i-AMD endaweni yayo engaphandle? -Zen? Isikhathi kuphela esizosho. Umbono wethu ngukuthi iRocket Rock yayiyinguqulo yokugcwalisa, yokonga isikhathi sokunyakaza okulandelayo. Ngalesi sikhathi ngo-2022, kufanele sazi ukuthi ngabe bekuyisithuthuku esinolaka yini ku-chessboard, noma nje ukuhamba kombhoshongo oseceleni.
I-amd ryzen 9 3900x vs Intel Core i9-9900k: iyiphi iprosesa ephezulu yokuthenga?
2021-04-18 22:26:16 | Amaprosesa
Ngokufika kweprosesa lokuqala leRyzen 9 e2019, i-AMD ikhulise ikhono layo lokuncintisana nokusebenza kwama-chips we-Intel ancintisana neCore i7 neCore i9. Uma ufuna ukusebenza okuphezulu, iprosesa ejwayelekile yedeskithophu, iRyzen 9 neCore i9 zombili izinketho eziphoqayo. Ku-2021, i-genzen entsha y...
Ini? Ama-amd's ryzen 5600x manje abiza u- $ 369?
2021-04-18 15:38:13 | Amaprosesa
(Isikweletu: I-Micro Center) Ngasizathu simbe, umthengisi we-elekthronikhi iMicrosoft Center ufuna ukuthi ukhokhe imali ethe xaxa ukuze ube neprosesa ye-AMD yeRyzen 5600X. Abakhi be-PC baqaphele ngoLwesibili ukuthi iMicro Center ithengisa iprosesa ethandwayo ngo- $ 369, okuyisibalo esikhuphuke kakhu...
Sizama ukuphazamisa umsebenzi waseChina kukhompiyutha enkulu ngokuvimba ukuthunyelwa kwamanye amazwe
2021-04-11 08:17:32 | Amaprosesa
(Isithombe ngu-Yang Bo / China News Service nge-Getty Images) Uhulumeni wase-US uphakamisa izivimbamgwaqo ukuvimbela i-China ukuthi izenzele ikhompiyutha yayo "exascale". NgoLwesine, uMnyango Wezohwebo wase-US ubeke izilawuli zokuthekelisa kwamanye amazwe ezikhungweni ezine ezinkulu zaseChina ezixhu...
Ukubuyekezwa kweprosesa le-Intel Core i5-11600k
2021-04-03 06:57:30 | Amaprosesa
I-six-core / 12-thread Core i5-11600K ($ 262) iletha ukuzinza okuthile ekwethulweni komugqa wama-processor we-Intel osanda kwethulwa we-11th (“Rocket Lake”). Isibonakaliso sokuqala sokuqaliswa kokuqaliswa kweRocket Rock kwakuwukuthengiswa komthengisi ngaphambi kwesikhathi kanye nokuhlolwa kwangapham...
Ukubuyekezwa kweprosesa le-Intel Core i9-11900k
2021-04-03 06:54:25 | Amaprosesa
Ingabe iprosesa yedeskithophu entsha ye- $ 539 Intel Core i9-11900K yenziwe nge-silicon? Yebo, kunjalo-ke. Ngabe lokho kusho ukuthi, ngokwandiswa lapha ku-2021, kungaba nzima ukuthola ngentengo enconyiwe ye-Intel? Kungenzeka kakhulu. Isidingo sezinto ezisezingeni eliphakeme sibhakwe kakhulu kulezi z...
Intel: Amaprosesa eRocket Lake akhanyiswe eluhlaza ngaphambi kokuncintisana ne-amd kwaba namandla kakhulu
2021-04-02 01:41:10 | Amaprosesa
(Isikweletu: I-Intel) Uma uzibuza ukuthi kungani ama-Intel's not-so-fascinating Rocket Lake processor ekhona, yazi ukuthi inkampani ivule ama-processor eminyakeni emibili eyedlule lapho i-chipmaker ibhekene nokuncintisana okuncane okuvela kumbangi ye-AMD. Ku-Reddit Ngibuze Noma Yini , I-Intel iveze ...
I-ARM yethula ukwakheka kwayo kwe-Armv9 nemephu yomgwaqo
2021-03-31 14:44:20 | Amaprosesa
Kusuka kumaphasipoti wokugoma kuya kumarekhodi ezokwelapha edijithali, amasistimu wokuhamba nge-drone kanye nobuchwepheshe bokubuyela okuphephile emsebenzini: USimon Segars, oyi-CEO ye-ARM, wethule amacala amaningi okusetshenziswa kokwakhiwa kwenkampani okokuqala kwe-IT eminyakeni eyishumi, i-Armv9....
Izintengo zeprosesa le-Intel Rocket Lake kungenzeka ziphume: i-core i9-11900k efakwe kuhlu ku- $ 599
2021-03-29 04:55:57 | Amaprosesa
Umthengisi we-PC eMilwaukee, eWisconsin kungenzeka aveze intengo yamaprosesa we-11th Gen Intel Core "Rocket Lake" ngaphambi kokwethulwa kwenyanga ezayo. iwebhusayithi, ebonwe ngumsebenzisi we-Twitter "@ harukaze5719" ngoLwesihlanu. Njengoba ubona, iprosesa enamandla kunawo wonke emndenini, i-Intel C...
Ungayikhetha kanjani iprosesa ye-laptop ngo-2021
2021-03-25 19:43:11 | Amaprosesa
Enhliziyweni yawo wonke ama-laptop kukhona i-central processing unit (CPU) ebhekele cishe konke okwenzeka ngaphakathi. Amaprosesa (abuye abizwe ngokuthi "ama-processor") owabona kuma-laptops enziwa yi-AMD, Apple, Intel, kanye neQualcomm. Izinketho zingabonakala zingenamkhawulo, namagama abo, iByzant...
I-Intel's 7nm PC chip izofika ngo-2023 isebenzisa ubuchwepheshe be-tsmc
2021-03-25 04:48:23 | Amaprosesa
I-Intel's 7-nanometer PC computing chip yokuqala iza ngo-2023, futhi uma kwenzeka, iprosesa ngeke libe yindalo ye-Intel kuphela. Esikhundleni salokho, inkampani ithi izophinda ithole ukukhiqizwa kwe-TSMC, okuyisisekelo sombangi we-AMD, ukukhiqiza okungenani ezinye izingxenye ze-chip. NgoLwesibili, u...
Iprosesa ye-Intel 'Alder Lake' yokuxhasa i-pcie 5.0, ddr5 ram
2021-03-23 02:17:11 | Amaprosesa
Amaprosesa we-Intel's "Rocket Lake" wedeskithophu azokwethula ngokusemthethweni ngesonto elizayo. Kepha okwamanje, imininingwane ye-chip elandelayo yenkampani, "i-Alder Lake, " ngokusobala ibisaputshukile. IVideoCardz ithole amaslayidi asemthethweni esethulo se-Intel e-Alder Lake, esizofaka phakathi...
Izintengo zeprosesa le-Intel Rocket Lake kungenzeka ziphume: i-core i9-11900k ibalwe ku $ 599
2021-03-20 00:50:07 | Amaprosesa
Umthengisi we-PC eMilwaukee, eWisconsin kungenzeka aveze intengo yamaprosesa we-11th Gen Intel Core "Rocket Lake" ngaphambi kokwethulwa kwenyanga ezayo. Umthengisi, iMilwaukee PC, kubonakala sengathi uthumele ngephutha amaprosesa wedeskithophu azayo iwebhusayithi, ebonwe ngumsebenzisi we-Twitter "@ ...
Ayisekho i-mac: imisele ye-apula ende yama-windows pc ezimemezelweni ezintsha ze-intel
2021-03-18 01:20:55 | Amaprosesa
(Isikweletu: Intel) UJustin Long, umlingisi ofakwe kuzikhangiso ze-Apple ezithi 'Get a Mac', ushintsha izinhlangothi bese ujoyina i-Intel ekuphakamiseni ama-Windows PC. Lwesithathu, i-Intel ikhiphe izikhangiso ezinhlanu zamavidiyo ezinezinzuzo ezinde ezikhuthaza ama-Windows PC ngenkathi ithatha izin...
Abathengisi Bakhuphula Amanani Oku-oda Oku-odwe ngaphambilini Ama-Intel's Rocket Lake Processors
2021-03-17 04:40:35 | Amaprosesa
Ama-oda wangaphambilini we-Intel "Rocket Lake" processors azayo aqala namuhla, futhi uma uhlela ukuthenga, zilungiselele amanani entengo. Abathengisi abakhulu bakhokhisa u- $ 75 kuye ku- $ 119 ngaphezu kwentengo ye-Intel imininingwane ephakanyisiwe yama-processor, ebenza babize kakhulu kunamaprosesa...
I-cpus ye-Intel rocket lake izozama ukushaya i-AMD ngamanani aphansi
2021-03-16 16:28:09 | Amaprosesa
Lapho kufika ama-processor we-Intel's "Rocket Lake" wedeskithophu, azoshaya amaprosesa ancintisanayo e-AMD okungenani endaweni eyodwa enkulu: intengo. I-Intel ekugcineni ilahla imininingwane yolayini wayo ogcwele wamaprosesa weCore. Isizukulwane se-11, kufaka phakathi ukuvinjelwa kwewashi labo, inan...